2010-01-21 @ 21:54 in Andavanandro
Efa nisinisy ihany ny nitantara ny zava-nitranga ny alakamisy 21 janoary eto amin'ny tontolom-bolongana malagasy. Mety kosa angamba raha mitantara izay hitako aho. Efa fofona manempotra no niandry anay teo amin'ny fandraisana fiara fitaterana teo Anosy manoloana ny Carlton sy ny radiom-pirenena. Tsy navelan'ny miaramila nijanona teo loatra ny fiara fa tereny handeha avy hatrany ary norarany tsy hahazo mijanona miandry fiara fitaterana eo ny olona. Heveriko fa ny tena naharomotra an-dry zalahy ireo dia hita fa betsaka amin'ny mpitolona teo no mpanohana an-d Ravalomanana, nefa tsy zakan-dry zalahy mihitsy ny tahaka izay. Tsy niala teo moa izahay mazava loatra. Teny antenantenan-dalana izahay no niala noho ny fitohanan'ny fiara... izany hoe tsy nisy valy bontana avy amin'ny olo-tsotra velively ka namaliana ireo mpitana ny fitaovam-piadiana ireo ary tsy nisy tapikana vato nitorahana mihitsy tavela teny amin'ny arabe.
Eny amin'ny arret eny Anosy manoloana sy ampitan'ny cité Jardin dia feno olona mijoro ihany koa, fantatra ireo fa tsy handray fiara velively fa miandry zavatra na manantontosa ny anjara tolony. Misy kosa ireo mpitana fitaovam-piadiana no aviavy amin'ny olona eo ka mandroandroaka sy manao ramatahora, eny fa na dia ireo olona any anaty fiara aza. Ny tena mafana fo amin'ny famoretana olona moa dia ny zandary (misatro-mainty), misy ny olona mihataka (miampita ny arabe) ary misy ny tsy mihetsika mazava loatra fa mijanona eo ihany. Ny zaridaina dia tsy azo ipetrapetrahana fa an'ny mpitana fitaovam-piadiana irery. Lasa misy sary vaovao mipetraka rehefa mahita izany tranga rehetra izany: sahala amin'ny hoe tsy azo idiran'olo-tsotra intsony ny zaridaina rehetra manerana ny tanàna.
Manaraka izany indray dia hiresaka kely ny lohateny aho. Nivezivezy ihany koa moa ny tena nijery hatrany ny teny amin'ny manodidina teny. Hita fa nisy andian'olona nipetraka nanemitra ny fefy avaratra (ivelany) amin'ny zaridainan'Anosy. Marihina indray fa olon-dehibe retirety sy vehivavy avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Maimbo rà indray ireo zandary efa niambina ilay fiantsoana manoloana ny Carlton ka niantso ny namany. Raikitra indray ny fandefasana baomba mandatsa-dranomaso ka voan'ilay bolongana iny tao anaty olona tao ny tovolahy iray. Naratra mihitsy moa izy io. Nahita izany ny ramatoa iray fa tonga dia nivavaka sy nandroaka devoly. Nampiempo ny mpitana fitaovam-piadiana angaha izany ka dia ny zanany avy hatrany no noraofin-dry zalahy. Nanaraka ho azy ramatoa... tsy nety nitsoaka moa izy ireo ka izay angaha no nanaovana ny fisamborana... Tsy nisy tora-bato tsy nisy fandrangitana velively tao anatin'izany fa olona nangina sy mipetraka no anaovan-dry zalahy fanamparan-kery. Sary voataratra ao anatin'izany: Miady amin'ny fanahy ratsy ny mpitolona ka tsy mba mamaly velively ny fihetsika ataon'ny mpitana ny fitaovam-piadiana... Ny fanahy ratsy no roahiny tsy hanjaka. Setrin'izany dia romodromotra aoka izany ireo mpitana fitaovam-piadiana te-hampiditra ny ady amin'ny nofo aman-dra... ary dia ny olo-tsotra tsy nanao ratsy na inona na inona azy no roadroahiny.
Maro an'isa amin'ireo mpitandro ny filaminana no mijoro fotsiny tsy manao na inona na inona fa iretsy vitsy an'isa iretsy no tsy fantatra intsony na entin'inona na entin'inona. Mpitana fitaovam-piadiana sivy kamiao miampy ireo avy amin'ny hery manokana mandeha amin'ny fiara tsy mataho-dalan-dratsy no tazana teny amin'ny manodidina teny. Mihinan-kanina fotsiny no ataony rehefa maraina fa manohana sahady ho fiomanany ny tolakandro angaha!
Tsy an-tsain'ny tena mpitolona velively ny hanao herisetra
Misy fanaovana dinika mavitrika amin'ny fanehoan-kevitra izay eto amin'ny aterineto fitsapako hatrany ny zavatra hitranga ny ampitso sy ny tetiky ny mpanakorontana. Ankehitriny dia velona indray ny fampirisihana ny hitora-bato na hitoraka flesy, handoro kodiarana, sy hevitra hafa ao amin'io fanaovana dinika io ho fampiomanana valifaty mandrakariva. Rehefa mahita hafatra sahala amin'ireny aho dia miahiahy avy hatrany fa ho avy hanao ny ataony indray ny mpanakorontana ny zoma 22 janoary 2010, hanao tetika handravana ny tolona ampilaminana izay tsy mamaly hery ny fampiasan-kery na dia na dia iharan'ny fanenjehana aza. Amin'izay fotoana izay ihany koa dia mba manana rariny ahay ny miaramila ny handrava ny hetsika fa tsy ry zareo indray no manakorontana sahala amin'izay nitranga ny alakamisy 21 janoary 2010.
Rehefa misy hatrany ny sakoroka dia misy ireo andian-jatovo mikendry ny hanararaotra mihazakazaka mafy nefa mitetika handrava tsena, sady any avy hatrany ny lalan'izy ireny. Ny tena mpitolona kosa miala tsimoramora ihany raha miala fa tsy mihazakazaka velively, sady ny ampahany betsaka amin'ireo mpitolona ireo dia aoka hotsorina fa tsy hahavita hihazakazaka noho ny fahanterany sy ny fahalemeny (ny antitra sy ny vehivavy no tena maro an'isa). Tsy misy mamaly tora-bato ny fandroahana ataon'ireo zandary ireo. Miaiky ny herimpon'izy ireo aho rehefa nahita azy ireny manerana an'Anosy, ary fantatra avy hatrany izy rehetra rehefa mandeha eny, eny fa na dia tsy mitondra sorabaventy sy tsy mihogahoga akory aza ry zareo(namana nahita tsara ny zava-nitranga sady manana bolongana rahateo no nahafantarako fa nihira ireo olona teo anoloan'ny Carlton, tranga izay efa novinavinaiko hisy mihitsy tamin'io andron'ny alakamisy io). Koa iangaviana ianareo miketrika herisetra hampitsahatra izany fikasanareo izany fa tsy vahaolana mihitsy izany indrindra manoloana ny hery tsy mitovy.
Dia efa vita tokoa angaha ny tolon'ny tanora na tsy mifanaraka amin'ny revin'ny tanora izy ity fa tsy dia hitahita loatra izy ireo. Tsy ampy fanentanana ve sa leo politika sahady? Tokony hisaina kosa anefa izy ireo hoe nahoana moa ireo olon-dehibe izay retirety sy manakaiky ny retirety ny ankamaroany no tsy laitra fa mandeha mitolona hatrany na dia efa fantany izao ny miandry azy? Sao dia lasa mahatsiaro ny endrika ratsy niainana nandritra ny fanjanahantany izy ireo ka miezaka ny hampiverina araka izay tratry ny heriny amin'ny famerenana indray ny fahaleovantena? Fanairana mandrakariva ireo izay mahatsapa ho manana andraikitra manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena no ataoko. Miandry toe-javatra hafa ny olona sa dia efa voafehy tanteraka ny reska fitsikilovana ka tsy misy intsony ny afaka mandray ny andraikitra tandrify azy?
Jentilisa, Zoma 22 janoary 2010 amin'ny 00:00